Krita 4.2.3 ikozvino yavapo: kugadzirisa bug uye chinonakidza chitsva | Linux Vakapindwa muropa
Kazhinji kacho kuburitswa kwekuchengetedza kunouyawo nechinhu chakanakisa chitsva. Ndizvo zvaakaita (isu hatitoziva uye isu tobva tatsanangura kuti sei kuvhiringidzika uku) KDE Nharaunda ne Krita 4.2.3, kuburitswa kunouya nehupfumi hwekugadzirisa zvipuka uye chinhu chitsva: kugona kutenderedza materu nechiratidzo pane yekubata pani. Chirevo chiri mubvunzo kubata neminwe miviri (usati watizivisa isu taitenda kuti dzinogona kutenderedzwa senge pa smartphone), chimwe chinhu chakaitwa naSharaf Zaman pagore rino reGoogle Zhizha.
Kana zviri zvekugadzirisa, chakanyanya kukosha hachizokanganisa ruzhinji rwevaLinux Vakapindwa muropa nevaverengi, kubvira inogadzirisa chinetso pakuiswa kweWindows nemadhiraivha emifananidzo yakaputswa, yechinyakare kana isingakwani. Dambudziko rinouya nekuti yavo yekuvandudza chikuva, Qt, mune yazvino vhezheni inoda inoshanda OpenGL kana Direct3D kuisirwa nekukurumidza kana paine chinhu chimwe chete muchishandiso chinoshandisa QML, tekinoroji yekugadzira mushandisi maficha. Dambudziko rinonyanya kuwanikwa pamakomputa anomhanya Windows 7.
Krita 4.2.3 inogadzirisa yakazara makumi maviri neshanu bugs
Pakati pezvakakurumbira zvitsva zvinowanikwa mune iyi vhezheni, isu tine:
Yakagadziriswa kopi / pasita yemaficha ehupenyu.
Wakawedzera bhatani kurodha zvakare script kune iyo Python script plugin.
Yakagadziriswa isingatarisirwe kupaza mukutarisa kana pasina mufananidzo wakavhurika.
Yakagadziriswa kudhonza uye kudonhedza kana uchizadza matete pakati pekuvhura mafaera.
Akaremara AVG optimizations yeimwe 32bit musanganiswa modes.
Yakagadzirisa kusamiswa kusingatarisirwi paunenge uchimanikidza «Kanzura» paunenge uchiedza kugadzira 8bit / Channel mutsara mutsara gamut RGB mufananidzo.
Krita 4.2.3 ikozvino yave kuwanikwa kubva kune aya maratidziro: AppImage, Flatpak y Snap. Tinogona zvakare kuwedzera repository yeUbuntu nemurairo uyu: sudo add-apt-repository ppa: kritalime / ppa (Iyo inowanikwawo mumahofisi epamutemo, asi zvinotora nguva yakareba kuti ivandudze). Windows uye macOS shanduro dziripo pano.
Wakambozviedza here? Iwe unofungei nezve iyo nyowani vhezheni yeKrita?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Krita 4.2.3 inouya nemukana mutsva wekutenderedza zvidimbu nechiratidzo pane yekubata pani